Ranby, near Retford, England, United Kingdom
UCottages,Com unezimvo eziyi-2525 zezinye iindawo.
Indlwana entle ebekwe kwindawo entle yaseNottinghamshire esemaphandleni elala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezine, okanye ibhukishe enye ipropathi ekwisiza ukuhlalisa amaqela amakhulu.. Umgangatho ophantsi:
Indawo yokuhlala eneplani evulekileyo.
Indawo yokuhlala: Ngesitshisi seenkuni kunye ne-32" yeFreeview Smart TV.
Indawo yekhitshi: Nge-oveni yombane, isitovu sombane, imicrowave, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Indawo esetyenziswayo/igumbi lokuqalisa: Nomatshini wokuhlamba.
Indlu yangasese eyahlukileyo.
Igumbi lokulala 1: Nebhedi enkulu.
Igumbi lokulala 2: Nge-zip kunye nekhonkco 2ft 6in iibhedi ezingamawele (inokuba yinkosi ngesicelo).
Igumbi lokuhlambela: Ngeshawari phezu kwebhafu, indlu yangasese kunye nentsimbi yetawuli eshushu. . Zombini iipropathi: Umthombo ophantsi wobushushu obuphakathi, umbane, ilinen yebhedi, iitawuli, iWi-Fi. Izigodo zokuqala zokutshisa iinkuni zibandakanyiwe. Ibhedi yohambo kunye nesitulo esiphezulu siyafumaneka xa uceliwe. Wamkelekile ipakethe. Igadi enendawo yokuhlala kunye nefenitshala yegadi. Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-2. Akutshaywa. Iindlwana ezimbini ezihlaziyiweyo, u-Olivia (ref UK13137) kunye ne-Cowslip (ref UK13138) zilungele ukuphumla nokuphumla. Ngamnye unesitshisi seenkuni kwaye unokubonelela iindwendwe ezifuna ukubaleka okusebenzayo. Ezi zindlu zangasese ezicandiweyo zilala ukuya kutsho kwiindwendwe ezine, kwaye zinomnyango odityanisiweyo onokuvumela iipropati ukuba zibhukishwe kunye. I-Cowslip inobunewunewu bebhafu yabucala eshushu kwindawo ebiyelweyo.
Izindlu zangasese zibekwe ngendlela elula yokufikelela kwi-A1, kwaye zibekwe kakuhle phakathi kweedolophu ezimbini ezinembali yentengiso yaseRetford naseBawtry. Iindwendwe ziya kuba nakho ukufumanisa iindawo ezininzi zasekhaya zokuthenga, ukujonga kunye nokutya ngaphandle, kubandakanya ii-pubs ezipholileyo kunye nokutya okulungileyo.
I-Ranby ibekwe ngokufanelekileyo kwiHlathi laseSherwood apho iindwendwe zinokufumana okungakumbi malunga neRobin Hood kwaye zityelele i-Major Oak eyaziwayo; kunye nenani lemihlaba ebalulekileyo yelizwe efana neClumber Park, iThoresby Park, iRufford Country Park kunye nekhaya elihle kunye nezitiya zeLord Byron eNewstead Abbey.
ICreswell Crags ekufutshane inomzobo womqolomba we-Ice Age waseBritane kuphela, kwaye idrayivu emfutshane iyakusa kwiNkqubo yokuLima yeMedieval yaseLaxton kunye neZiko leSizwe lokuQothulwa kweNkohlakalo.
I-Nottinghamshire igxininise kwimbali kubandakanya iiPilgrim Fathers kunye neMfazwe yamakhaya. Iziko lePilgrim eRetford likufanele ukutyelelwa; njengokuba linjalo iziko leMfazwe yamakhaya laseNewark kunye neSouthwell ene-minster yayo entle kunye nendlu yokusebenzela, kutyelelo olunomahluko.
Iintsapho ziya kufumana iindawo ezininzi zokundwendwela kunye nokuhlola kubandakanya iSundown Adventureland, Yorkshire Wildlife Park, Wheelgate Park kunye neWhite Post Farm. Izindlu zangasese zifanelekile kubathandi bendalo ukuba baphumle emaphandleni kwaye bajonge iChesterfield Canal ekufutshane, i-Idle Valley Nature Reserve kunye neDaneshill Lakes.
Iindwendwe ezisebenzayo zingonwabela ukukhwela ibhayisekile ezindleleni ezigqwesileyo okanye iingoma zebhayisikile ‘ngaphandle kwendlela’ kunye neGo Ape adventure eSherwood Pines. Iindlwana zinendawo yokugcina iibhayisekile. Uluhlu lweekhosi zegalufa kunye namachibi okuloba akufuphi, kwaye ngonxibelelwano lwendlela olugqwesileyo, abakhenkethi banokuya kude kancinane ukuya eYorkshire, eDerbyshire okanye eLincolnshire.
I-Ranby Cottage Farm Cottages inika iindwendwe indawo efudumeleyo nekhululekileyo, efanelekileyo yekhefu elifutshane okanye isiseko seholide. Ivenkile, i-pub kunye nevenkile yokutyela iimayile ezi-2.
Ezi propati zinokubhukishwa kunye ukuze zihlalise ukuya kwiindwendwe ezisi-8.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-2 525 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Izimvo eziyi-2 525
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ranby, near Retford